परदेश – Pahilo Page
कतार । समाजसेवा अभियान रुपन्देही कतारको छैठौ साधरणसभा तथा पाँचौ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले डिल्लीराम भट्टराईको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको छ । नवगठित कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा हरिबहादुर शाही, सचिवमा कृष्णप्रसाद न्यौपाने, सहसचिवमा शिवराज शाही, कोषाध्यक्षमा विष्णु खड्का, सहकोषाध्यक्षमा मनोज कुँवर रहेका छन् । त्यस्तै सदस्यहरुमा क्रमशः
नेपालको बाम गठबन्धनलाई साउदी अरबका नेपालीबाट स्वागत
रियाद । पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यसहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गरिएको बाम गठबन्धनलाई प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले पनि स्वागत गरेका छन् । एमालेको प्रवास संगठन प्रवासी नेपाली मञ्च साउदी अरव र माओवादी केन्द्रको प्रवास संगठन नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च साउदी अरबको रियादमा संयुक्त बैठक बसी बाम गठबन्धनलाई स्वागत गर्ने निर्णय गरेका हुन
केटीको फेक आइडीबाट अश्लील फोटो पोष्ट गर्ने युवक गिरफ्तार
भारत । भारतको वाराणसीमा एक युवकलाई प्रहरी र त्यहाँको क्राइम ब्रान्चले गिरफ्तार गरेको छ । एक युवतीको फेक फेसबुक आइडी बनाएर अश्लील फोटो र युवतीको मोबाइल नम्बर पोष्ट गरेको आरोपमा राकेश नाम गरेको युवकलाई गिरफ्तार गरेको हो । प्रहरी निरीक्षक एके सिंहका अनुसार पाण्डेयपुरमा दुकान गरेर बस्ने राकेश नामको युवकले
दोहामा पर्वत सेवा समाजद्वारा चाडपर्वको अवसरमा भलिबल प्रतियोगिता
दोहा, कतार । पर्वत सेवा समाजले दोहा कतारमा दीपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । दुई दिनसम्म चलेको भलिबल प्रतियोगितामा १४ वटा टिम सहभागी भएका थिए भने पर्वत ए टिमले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो । प्रतियोगितामा पहिलो हुने टिम पर्वत (ए)ले नगद
जापानमा पर्यटन पत्रकार संघको शाखा गठन
काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकारहरुको साझा संगठन नेपाल पर्यटन पत्रकार संघ (एन्टोेज)को जापानमा विदेश शाखा गठन भएको छ । प्रकाश वलीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जापान शाखा तदर्थ समिति गठन गरिएको हो । टोकियोको सिन्जुकुमा पत्रकारहरुको एक भेलाले तदर्थ समिति गठन गरेको हो । भेलाले प्रकाश वलीको संयोजकत्वमा समिति गठन
खोटाङ सेवा समाज कतारको काम उदाहरणीय
कतार । कतारमा स्थापित नेपाली समुदायको पहिलो र पुरानो संस्था खोटाङ सेवा समाज कतारले आफ्ना सदस्यहरु तथा कतारमा थलो बनाएका गृहवासीहरुलाई समेटी एक दिने संस्थागत र सांगठानिक प्रशिक्षण कार्यकम सम्पन्न गरेको छ । त्यस अवसरमा संस्थाका वर्तमान पदाधिकारीहरुले कतार लगायत गृहजिल्लामा निकै उदाहरणीय कामहरु गर्दै आएको बताइएको थियो । संस्थाले
अन्तर्राष्ट्रिय अर्घाखाँची सम्पर्क मञ्चको संयोजकमा घिमिरे
काठमाडौं । अर्घाखाँची जिल्लाबाट रोजगारी, शिक्षा, व्यापार तथा विविध कार्यले जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका अर्घेलीहरुको एकमात्र साझा संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अर्घाखाँची सम्पर्क मञ्चले आफ्नो पहिलो अधिबेशन सम्पन्न गरेको छ । २०६९ सालमा संगठित भएको संस्था केही समय पहिलेदेखि निष्क्रिय रहँदै आए तापनि २ हप्तादेखि प्रथम अधिबेशनको आव्हान गरी डिल्लीराज घिमिरेको संयोजकत्वमा नयाँ
कसले गर्यो दाङकी इन्द्रकुमारी गिरीको राहदानीको साउदी अरबमा दुरुपयोग ?
नेपाली राहदानीको चरम दुरूपयोग, विश्व मै बदनाम। एउटी नेपाली मूलकी भारतीय महिला दाङ कि इन्द्र कुमारी गिरीको राहदानीमा उनको फोटो टाँसेर दिल्लीबाट ६ बर्षअगाडी साउदी अरेवीया छिरेकी रहेछिन्। तीनदिन अगाडी उनि उद्धार गराईपाऊ भनेर नेपाली दूताबास, रियादमा शरण पर्न आएकी रहेछिन्। दूताबासले उनको बारेमा सबै अनुसन्धान गर्दा उनि पश्चिम बङ्गाल
युएईमा अलपत्र नेपालीबारे पत्रकार महासंघ र दूतावासको आरोपप्रत्यारोप
दुबई । नेपाली दूताबास युएइले यहाँ अलपत्र परेका १९ जना नेपालीबारे लेखिएको समाचारलाई खण्डन गरेको छ । दूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वाग्रह राखेर पत्रकारले समाचार लेखेको आरोप लगाएको छ भने नेपाल पत्रकार महासंघको युएई शाखाले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ । अवैध मानिने भिजिट भिसामा युएई आई अलपत्र पर्ने तथ्य
पीडित राईलाई खोटाङ सेवा समाज कतारको सहयोग
कतार । खोटाङ सेवा समाज कतारले कतार आएका खोटाङ जिल्लाका पीडित प्रदीप राईलाई १७ जुलाई २०१७ का पीडित राईकै कम्पनीको क्याम्पमा गएर आर्थिक र खाद्यान्न सामाग्री तत्कालका लागि सहयोग गरेको छ । खोटाङको दीपरुङ गाउपालिका– १ बतासेका राई करिब ३ महिना अगाडि कतारको क्यापिटल ब्रान्च भन्ने कम्पनीमा रोजगारीको सिलसिलामा आएका
एनआरएनए एनसीसी कतारमा यसपालि ३०५१ जनाको आवेदन दर्ता
दोहा l एनआरएनए एनसीसी कतारको सातौं अधिवेशनको फारम बुझाउने म्याद १४ जुलाई २०१७ मा सकिएको छ l म्याद सकिएसंगै आगामी कार्यकाल १७ – १९ को पार्षद सदस्यताको लागी आवेदन दिएका सदस्यहरुको संख्या ३०५१ रहेको छ l भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार अहिले आवेदन दिएका आवेदकहरुको प्रमाणित कागजातहरु चेकजांच गर्ने काम भई
कतारमा कसले पाए ल्यापटप, टिभी, ट्याबलेट, मोबाइल र घडी ?
कतार । म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ, राष्ट्रिय कार्यकारी समिति (मोना कतार)ले आकस्मिक कोष सहयोगार्थ सन्चालन गरेको भाग्यशाली चिट्ठा कार्यक्रमको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । दोहाको भुयान (नेपाली आगन) रेस्टुरेन्टको सभा हलमा शुक्रबार सम्पन्न कार्यक्रममा उक्त नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा सस्थाका अध्यक्ष रमेस पौडेलले सभापतिको आशन ग्रहण गरेका थिए ।
एनआरएन स्पेनको सचिवमा अधिकारीको उम्मेदवारी
स्पेन । एनआरएनए एनसीसी स्पेनको अधिवेशन नजिकिदै गर्दा विभिन्न पदहरुको निम्ति भागदौड सुरु भैसकेको छ । यसै क्रममा तारानाथ अधिकारीले स्पेनको एनआरएन २०१७–२०१९ कार्यकालको निम्ति सचिव पदको लागि उम्मेदवारी गराएका छन् । खाडी मुलुकहरुमा १२ वर्ष कम्प्यूटर इन्जिनियर पदमा रही विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी कम्पनीहरुमा काम गर्दै आएका तारानाथ अधिकारी समाज
गल्फ संयोजक भएमा ५१ लाखको विपद कोष खडा गर्ने प्रतिवद्धता
एनआरएनको गल्फ संयोजकमा शर्माको उम्मेदवारी
दोहा । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनको गल्फ संयोजकमा आरके शर्माले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । दोहाको एक कार्यक्रममा शर्माले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । अघिल्लो कार्यकाल एनआरएनए आइसीसी सदस्यमा मनोनीत शर्माले १३ वर्षदेखि कतारमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । कतार बसाइको क्रममा हरेक समयमा सामाजिक कार्यमा हातेमालो गरेका शर्माले